Mety Ho Vita Bangladesh Ny Fanaminao Amin’ny Mondialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2014 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, македонски, Français, বাংলা
Laharana gisigisitra i Bangladesh eo amin'ny ekipa baolina kitra manerantany ary tsy tafiditra hilalao amin'ny Mondialy FIFA amin'ity taona ity ihany koa, saingy mbola manana anjara toerana lehibe ao Brezila ity firenena be mponina ity — mitondra ny marika “Vita Bangladesh (Made in Bangladesh)” ny maro amin'ireo fitafiana eny amin'ireo mpankafy sy ny sasany amin'ny fanamian'ireo mpilalao.
Orinasa mpanamboatra akanjo, izay efa nampidi-bola betsaka indrindra ao amin'ny firenena tamin'ny fanondranana entana no nahazo 500 tapitrisa dolara Amerikana farafahakeliny amin'ny fanondranana entana amin'ny fanjairana ny fanamian'ireo mpankafy ny ankamaroan'ireo mpilalao izay ahitana ekipa mpandray anjara 16 amin'ny Mondialy, anisan'izany i Arzantina, Brezila, Italia, Iran, Frantsa, Angletera, Soisa, Belzika, Shily ary Alemaina. Antenaina hampiroborobo ny indostria izany varotra izany.
Nanamboatra ny fanamian'ireo ekipam-pirenena Breziliana ihany koa i Bangladesh. Nanapa-kevitra ny Kaonfederasion'ny Baolina Kitra Breziliana (CBF) fa ny “Made in Bangladesh” no tokony misoratra eo amin'ny farany ambanin'ny fanamiana mba hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina tamin'ny firodanan'ny Rana Plaza tamin'ny taona 2013 izay namoizan'ain'olona maherin'ny 1100 sy ny fahamaizan'ny orinasa Tazreen Garments izay nahafaty mpiasa maherin'ny 100, araka ny tatitra avy amin'ny fampahalalam-baovao.
Niarahaba an'i Bangladesh amin'ny asany tao amin'ny tranokalam-baovaon'ny baolina kitra Side Tackle i Karima Haque :
Tanvir Ahmed, mpanohana ny Klioba Baolina Kitra Liverpool ao an-drenivohitr'i Bangladesh, Dhaka, nisioka hoe:
Voaporofo ho tombontsoa hoan'ny fandraharahana ny fitafiana. Bangladeshita mpanamboatra akanjo sady mpilalao horonantsary malaza M. A. Jalil Ananta nanazava nandritra ny antsafa tamina gazety ao an-toerana momba ny toekaren'ny fanondranana entana: